juni 2021 - NorSom News
Xeer cusub: Dadka sawirada iyo muuqaalada qaawanida ah faafiya oo xabsi mudan kara.
Norsomnews - 30. juni 2021
Booliska: Arrintan iska hubi, inta aadan safar u bixin.
Warbixin: Norway oo ah dalka Labaad ugu badeeco qaalisan Yurub.
Haweenay lagu eedeeyay inay Haaf-Milyan ka xaday dukaanka Coop oo ay ka shaqeyn jirtay
Norsomnews - 28. juni 2021
Hanad-Wiil soomaali ah oo 142 sano oo xabsi ah loogu xukumay inuu badbaadiyay 31 qof!
Ap oo soo dhaweeyay in xero qoxooti ah laga furo qaarada Afrika: Wadadii Denmark.
Xaas uu 12 sano jir ku guursaday ayaa loo ogolaaday in Norway uga dacwoodo.
Macluumaad laga ogaaday soomaaligii sadexda qof ku dilay dalka Germany.
Norsomnews - 26. juni 2021
Canada oo qaxooti badan oo Soomaali ah ka qaadaneysa dalkan.
Deg-deg: Nin soomaali ah oo sadex(3) qof mindi ku dilay, lixna(6) ku dhaawacay.
Norsomnews - 25. juni 2021
Solberg: Wali Kuma fakarin inaan gacmaha taago.
Booliska: Waxaan qabanay koox soomaali u badan oo Daroogo u kala qaadi jirtay Oslo ilaa Tromsø.
Norsomnews - 24. juni 2021
Oslo oo gole deegaan oo cusub yeeratay
Daawo wararkii ugu danbeeyay ee Norway iyo go´aanada dowlada
Kiiskii dilka wariye Jamaal Khashoggi oo Mareykanka dib dabadda ula galay.
Norsomnews - 23. juni 2021
Qof dheeri ah ayaa u martiyay: Maxkamad ayuu kiiskeedu tagay.
Oslo: Labo(2) nin oo ku eedeysan kufsiga nin kale.
Norsomnews - 22. juni 2021
Tirokoob: Hal milyan qof oo Norwiiji ah ayaa kali nool ah.
Dowlada Norway oo Dr. Ayaan Bashiir ku dartay gudi(Komishin) muhiim ah.
Soomaali ku eedeysan kufsiga gabar ay xaaskiisu dhashay oo maxkamad lasoo taagay
Norsomnews - 21. juni 2021